Hilaza izay tsy voalaza any an-kafa
2010-04-08 @ 11:08 in Politika
Na dia eto an-tserasera mandrakariva aza ny tena dia mihavitsy ihany ny soratra vitan'ny tena. Tsy haiko loatra hoe mihalefy ve ny fitiavan-kanoratra sa variana mitazana indray. Eto indray angaha ny fotoana hanamarihana izay tsy voalaza any an-kafa any nefa heveriko fa tsara fantarin'ny Malagasy manerantany ihany. Mety ho efa nisy ny nilaza saingy tsy nandalo ny masoko loatra nefa aleo soratana mba ho vavolombelon'ny tantara ihany.
Niova loko ny fitoeram-pako
Satria moa loko maodelin'ny fitondrana nanongam-panjakana ankehitriny ny lokon'ny dabam-pako fahita mahazatra teto Antananarivo sady natao ho loko maodelin'ny tolona nataony tamin'ny taona 2009 rahateo dia novana ho lokon'ny gazetin'ny mpitondra teo aloha sady somary mandravaka ny lokon'ny gazety tia tanindrazana ankehitriny indray ny lokon'ireny toeram-pako ireny. Saiky misy itovizana amin'ny lokon'ny fiarakaretsak'Antananarivo moa izany loko izany fa ny an'ny fiarakaresaka nasiana "'crême" fotsiny.
Heverina fa hanova zavatra sy fisainana angaha izany fanovana ny lokon'ny fitoeram-pako sy fanariam-pako izany satria efa nisy rahateo ny nanadrohadro io loko nosoloina io hitovy laharana amin'ny fako. Tsy reko nisy nilaza loatra io fa anjaran'ny eto an-toerana ny manamarika azy avy eo. Tsy manana fakantsary intsony moa ny tena ka dia ny mitantara am-bava no mba vita.
Ny lokon'ny TGV no nandravaka ny HMF
Raha halavaina kokoa dia ny lokon'ny mpitondra ankehitriny no nenti-nandravaka ny kianjan'Alarobia nanatontosana ny fotoam-pivavahana notarihan'ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana. Ny sary no maneho fa tsy sahy miteny ny maro fandrao manko mahatafintohina ny hafa izay tsy nahatsikaritra izany. Natao mibaribary tamin'ny kianja ny loko laoranjy sy ny loko manga antitra an'ny TGV araka ny efa nolazaiko teo aloha ankoatra ny loko fotsy efa fahita mahazatra amin'ny hetsiky ny mpitondra fivavahana.
Somary gaga ihany manko ny tena raha nandre fa ny Kaominina Antananarivo renivohitra mihitsy no nanolo-tena hikarakara ny sehatra fitenenan'ny Mpitarika sy ny mpitoriteny... hay hametraka ilay loko no nahamaika, tena miankina amin'ny loko ve ny fitondrana ankehitriny?
Tsy hita nanjavonana ny PHAT
Hatramin'ny Asabotsy niaingany ho any amin'ny toerana tsy fantatro dia tsy hita ampahibemaso loatra ny PHAT. Ny fiara fotsiny no mody mirimorimo toy ireny hanjakazaka ireny fa ilay olona ao anatiny arovana tsy hita akory. Somary nahavariana ihany koa manko raha lazaina ho filankevitry ny Minisitra no praiminisitra no nitarika azy. Tsy dia fahita loatra na izaho no tsy nahatsikaritra. Ny filankevitry ny governemanta manko no tarihan'ny praiminisitra fa tsy izany filankevitry ny Minisitra izany, saingy ao anatin'ny tsy ankiteniteny avokoa moa izany. Mampanontany tena ihany manko raha fanendrena ny Praiminisitra ho minisitry ny foloalindahy no atao ao anatin'ny filankevitra tsy nahitana izay misy ny PHAT.
Tapaka ny aingam-panahy fa tapaka ny jiro ka ireo aloha no atolotra fa amin'ny manaraka indray. Nosoratako halina fa izao vao tafavoaka.
Jentilisa 08 avrily 2010 amin'ny 13:11